Duqeymaha Mareykanku ka geysto Soomaaliya oo la sheegay in aysan dalka Nabad ka dhigeynin | Hobyo Media Online
Duqeymaha Mareykanku ka geysto Soomaaliya oo la sheegay in aysan dalka Nabad ka dhigeynin
Duqaymo Badan oo Mareeykanku uu Soomaaliya kula Beegsado Al-shabaab Nabad uma keenayaan Dalkan ay dagaaladdu aafeeyeen mana ka niyad jabinayaan Al-shabaab in ay sii wadaan howlgaladooda, sida ay sheegeen qubaro baaaris ku sameeyay Dagaalka Soomaaliya.
Magaal lagu daabacay Wakaaldda Wararka u faafisa Wadanka Turkiga ee Anadolo ayaa faah-faahiyay sida aysan duqaymaha Mareeykanku Nabad ugu horseedeeynin Soomaaliya iyo badalkooda wadada ay taahy in la qaado, si dalku nabad u ahaado.
“Soomaaliya ay waxay u baahantahay Wada hadal qaran . Taageeradda Beeca caalamku waa in ay diiradda saartaa in nabadda lagu gaaaro wada hadal iyo dib u heshiisiin ku saleysan cadaalad” ayuu yiri Shadrack Gutto oo ah Professor wax ka dhiga Jamaadda koofur Africa.
Gutto waxaa uu sheegay in Beesha Caalamka looga baahanyahay in ay Ciidanka Qalabka sida ka caawiyaan tababarka iyo qalabka sia ay awoodooda ugu difaacdaan dhulka ay heeystaan.
“Awood shisheeye Nabad kama keeni karto Wadan kale, gaar ahaan meel ay kala qaybsanaan ka jirto, sida Xaaladda Soomaaliya ee Al-shabaab ay u dagaalamayaan sidii ay Dowlad islaami ah u sameeyn lahaayeen iyo kuwo kale oo arrimo qabiil u dagaalamaya” ayuu hadalkiisa kusii daray Gutto.
Sanadihii u dambeyay Mareeykanku waxaa uu Howlgallo wada jir ah la sameeynaayay Howlgalka Midowga Africa ee Soomaaliya AMISOM iyo Ciidanka Qalabka sida ee Soomaaliya, waxuuna Sedaxdii sano ee lasoo dhaafay uu kordhinaayay duqaymaha uu la beegsado Al-shabaab.
Duaymaha Mareeykanku 35 ayey ka kordheen 2017kii waxayna gaareen 47 2018kii.
Todobaadkii lasoo dhaafay Taliyaha Ciidanka Mareeykanka ee Qaaradda Africa Thomas Waldhauser ayaa u sheegay Guddiga Ciidanka u qaabilsan Senate-ka Mareeykanka in duqaymaha soo laa-laabtay ay ku guul dareeysteen in ay cirib tiraaan al-shabaab.
“Qaybta hoose ee Ciidana Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa u baahn in la dhiso, waxay u baahanyihiin in ay kordhiyaan ayna qaadaan masuuliyadda amnigooda” ayaa laga soo xigtay Waldhauser, sida ay Warisay Anadolu.
Sidaa darted, Mareeykanku in ka badan 10 duqaymood ayuu Soomaaliya ka geystay ayuu Waldhauser hadalkiisa kusii daray.
Yusuf Serunkuma oo macalin ka ah Jaamacadda Makerere ee Dalka Uganda ayaa shegay in xalinta xaaladda Soomaaliya uu wada hadalku lama huraan u yahay.
‘Ciidanka Qaranka oo la adkeeyo iyo weeradda Al-sbabaab oo la kordhiyo midna ma xasilinayaan Soomaaliya” ayuu yiri Yusuf Serunkuma.
Waxaa uu ku taliyay in ay Dowladda Soomaaliya ay biloowdo Wada hadallo kuwaas oo ay ku jiraan dhamaan dhinacyadda oo Al-shabaab ay ka mid yihiin.
Ka sokoow in Qurabaddu ay ku doodayaan in Wada hadalku uu xalka kowaad u yahay Soomaaliya hadana Dalka kama jiro ifafaalo wadahadal ku dhex mari karo Dowladda iyo Al-shabaab. Sidoo kale ma muuqdaan Awoodaha shisheeye ee Soomaliya taageera in ay isku howlayan wada hadal siinta Dowladda iyo Al-shabaab.